🥇 ▷ Dhacdooyinka Gaarka ah ee Apple - Baro nolosha cusub ee iPhone 11 ✅
Dhacdooyinka Gaarka ah ee Apple – Baro nolosha cusub ee iPhone 11
Maanta waa Apple iyo mar kale iPhone. Masraxa Steve Jobs wuxuu horeyba diyaar ugu yahay inuu albaabka u furo dunida oo uu u sheego dhammaan wararka, taas oo runtii aan looga tegi doonin iPhone-ka.
Nagu soo biir oo kaalay raac dhacdooyinka oo dhan.
Warka la filayo
O iPhone 11 Tani waa warka weyn ee la sugayo maanta. Magaca uu magaca kujiro Tim Cook wali lama hubo, laakiin sedex qeybood ayaa durba la arkaayay: iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Intaa waxaa sii dheer, nashqadeynta loogu talagalay moduleka kaamirooyinkooda ayaa durba hela faallo badan (dhammaantood ma aha kuwa wanaagsan) marka loo eego foomka iyo booska.
Qalabka processor-ka wuxuu noqon doonaa A13 Bionic oo laga yaabo inuusan weli aheyn midka la yimid kicinta bilaa wireless ee dib loo rogi karo.
Si kastaba ha noqotee, tixraacyo dhowr ah ayaa laga helay aalad “Tag1,1In the iOS 13 beta. Waxaa loola jeedaa, barnaamijka ‘Raadi My’ ‘. Shirkadda Tim Cook ayaa la rajeynayaa inay ku soo saarto aalad qaab fudud, ugu yar, oo si muuqata loogu bedeli karo Tile.
Soo bandhigida adeegyada Apple TV + iyo Arcade, shirkadda waxaa laga filayaa inay cusbooneysiiso Apple TV oo markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay sanadkii 2017.
Ugu dambeyntii, Apple Watch waxaa laga yaabaa inuu la yimaado laba nooc oo cusub oo ah Taxanaha Apple Watch 5. Waxaa loola jeedaa mid ku jirta dhoobada iyo hal aluminium. Marka lagu daro dhammaystirka cusub, waxaa la rajaynayaa kor u kaca processor.
Intaa waxaa dheer, noocyada nidaamyada hawlgalka ayaa sidoo kale lagu shaacin doonaa maanta oo loo heli doonaa kuwa soo saara.
Dhacdooyinka Gaarka ah ee Apple Live
Waxyaalaha Ugu Muhiimsan
Dhacdadu waxay bilaabmaysaa 18h waxaana halkan lagu soo bandhigi doonaa wararka ugu waaweyn. Nala joog oo sii wad cusboonaysiinta maqaalka!
Muusiggu ma joogsan doono oo Masraxa Steve Jobs wuxuu bilaabay inuu buuxiyo.
Sawir la wadaagay The Verge.
6 pm fiiqan! Dhacdadu waxay ku bilaabatay muuqaal gaaban oo muujinaya badeecado kala duwan oo ka socda Apple.
Tim Cook wuxuu qaataa masraxa wuxuuna bilaabayaa ka hadalka App Store iyo Apple Arcadian.
Shirkadda cusub ee Apple Arcade ayaa imaanaysa App Store. Sidaas darteed, waxay la imaaneysaa cayaaro bil kasta, oo leh talooyin, qalabka ciyaarta iyo “waxyaabo gaar ah oo tifaftire ah” sida hageyaasha ciyaarta iyo fikradaha loo yaqaan ‘shunks’.
Ilaa iyo markaa, la wadaag waxyaabaha aad ka fileyso munaasabadda weyn ee maanta!